Fanafihana tany Befandriana Avaratra Nodimandry koa ilay zandary, jiolahy iray tratra
Nodimandry omaly alarobia tamin'ny 12ora 30 tao amin'ny hopitaly Soavinandriana Antananarivo ny zandary prinsipaly kilasy ambony,
komandin’ny Tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena tao Befandriana Avaratra. Natao ny ezaka rehetra nanavotana ny ain'ilay maherifo izay voatery notsaboina taty Antananarivo noho ny ratra nanjo azy nandritra ilay fanafihan-jiolahy nitranga tany an-toerana ny alin’ny 29 jolay lasa teo nefa tsy tana ny ainy.
Raha tsiahivina, nodimandry ilay Ben'ny tanànan'i Belalòna voatifitra niaraka taminy tamin'io asan-jiolahy io ka vao tamin'ny 5 aogositra no nentina nianavaratra ny razana. Araka ny fampitam-baovao ofisialin’ny zandary teo amin’ny Toby Andrefan’Ambohijanahary omaly nanoloana ny mpanao gazety dia ilay teratany sinoa nanofa trano tao amin’ny Ben’ny tanàna no nokasain’ireo jiolahy enina hotafihina. Nampandre ny zandary ity manampahefana eo an-toerana ity ary rehefa tonga ny mpitandro filaminana dia nivoaka izy. Tamin’izay no nahavoa azy roalahy ireto. I Iolohay; iray tamin’ny 6 no tratra ka efa misokatra ny fanadihadian’ny zandary.